Ma jiro taariikhda iibka rasmiga ah ee Apple Watch Series 7 | Wararka IPhone
Tani waxay ahayd mid kale oo ka mid ah wararka ama xanta oo faallo ka bixinaysay toddobaadyo ka hor soo bandhigidda Apple Talaadadii la soo dhaafay. Shirkadda Cupertino waxay umuuqataa inay waxoogaa dhibaato ah ka haysatay soo saarista saacadaha casriga ah ee jiilka ugu dambeeyay inkasta oo ay run tahay waxaa la tusay dadweynaha, Ma haystaan ​​taariikh iib oo rasmi ah mana haystaan ​​taariikh boos celin.
Mark Gurman laftiisu wuxuu ka digay maalmo kahor dhacdada in Apple ay dib u dhigi karto gaarsiinta saacadaha ama xitaa ay bixin karto kayd aad u hooseeya. Waa hagaag, saadaasha Gurman run bay noqotay oo hadda Suurtagal ma aha in la ogaado goorta aan heli doonno taxanahaan cusub ee Apple Watch 7.
Websaydhka Apple wuxuu u calaamadiyaa dayrta bilowga iibka
Websaydhka Apple waxaad ku arki kartaa inaysan jirin taariikh gaar ah oo loogu talagalay moodooyinka Taxanaha 7 waxayna yiraahdaan iibku wuxuu bilaaban doonaa dayrta. Waxaa laga yaabaa in ka hor dhammaadka Sebtembar ama dhammaadka tan la sii hayn karo laakiin markaa waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la hubiyo kaydka alaabta ay hayaan. Haddii ay soo daahaan wax -soo -saarka, waxaa suurtogal ah inaysan jiri doonin moodallo aad u badan oo la iibinayo markay bilaabaan.
Hadda waa waqtigii la sugi lahaa oo kuwa diyaar u ahaa inay beddelaan Apple Watch -kii hore waa inay lahaadaan xoogaa dulqaad dheeri ah ilaa moodooyinka cusub la iibinayo. Xusuusnow in lagu heli doono shan midab iyo in qiimaheeda iibku wuxuu la mid noqon karaa midka aan hadda u hayno Taxanaha 6, oo ka yimid 429 euro haddii aan dhug u yeelanno qiimaha lagu tilmaamay dhacdada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Ma jiro taariikh rasmi ah oo iib ah oo loogu talagalay Apple Watch Series 7
Sonos Beam oo wata Dolby Atmos hadda waa dhab